अपि पावरद्वारा बुक क्लोजको मिति गल्ति भएको स्वीकार - Aarthiknews
अपि पावरद्वारा बुक क्लोजको मिति गल्ति भएको स्वीकार
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले १६औं वार्षिक साधारण सभाका लागि तय गरेको बुक क्लोजको मितिमा गल्ति भएको स्वीकारेको छ । कम्पनीले आइतवार सुचना सार्वजनिक गर्दै फागुन १५ गते प्रकाशित सुचनामा बुक क्लोजको मिति गलत प्रकाशन भएकोमा क्षमा मागेको छ ।
बुक क्लोज सम्बन्धी सुचना पुनः प्रकाशन गर्ने जानकारी कम्पनीले दिएको छ । कम्पनीले चैत ७ गते कार्की बैंक्वेट, माईतीघर, काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सभा बोलाएको हो । कम्पनीले ५ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव गरेको छ । हालै स्वीकृति पाएको ४७ प्रतिशत हकप्रद पश्चात कायम हुने चुक्तापूँजीको १ बराबर शून्य दशमलव ९०९६ (१ः०. ९०९६) का दरले फेरी हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव समेत सभामा पेश गर्नेछ ।
सभाको अन्य प्रस्तावमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गरी अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने रहेको छ । साथै, ५ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने र हकप्रद निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा थप लगानी गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले चैत १ गतेदेखि ७ गतेसम्म शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने भएको छ । चैत ६ गतेसम्मका कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।
अनलाइन शेयर कारोबारबाट लगानीकर्ता हैरान, ब्रोकर मालामाल, कहिले घट्छ ब्रोकर कमिशन ?
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ ८ लाख बढीले भरे , २ लाख ७३ हजारले मात्र १० कित्ताका दरले शेयर पाउने